नुवाकोटको विकास र सम्बृद्धिका लागि जनताले मलाई मतदान गर्छन: जगदिश्वरनरसिंह केसी
स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी
बोधिसत्वका मास्टर हेगुवाङ शीलाई सम्मान
प्रकाशित मिति: 2017/11/20
जगदिश्वरनरसिंह केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नुवाकोट क्षेत्र नं २ को क बाट प्रदेश सभा उम्मेदवार बनेका छन् । केसी नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति पनि हुन । विगत लामो समय देखि राजनीतिमा सक्रिय केसी सांसदको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका छन्। यतिबेला चुनावलाई लक्षित गरि घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका केसीसँग उनको उम्मेदवार र भावी योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानी :
चुनावी अभियान कस्तो चलिरहेको छ?
चुनावी प्रचार अभियान निकै तीब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । विहान देखि बेलुकीसम्म नै हामी गाँउ–गाउँ, टोल–टोलमा पुगेर प्रचार–प्रसार गरिरहेका छौ । र, मतदाता पनि भोट हाल्ने दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
तपाईलाई नुवाकोटका जनताले किन मतदान गर्ने ?
म १६ वर्षको उमेर देखि नुवाकोटका जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुको हकहितमा काम गर्दै आएको छु । उनीहरुको साथीको रुपमा काम गरेको छु । मलाई यस क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे राम्रोसँग थाहा छ । विकास निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने म उम्मेदवार बनेको क्षेत्रमा मात्र होइन अन्यत्र पनि मैले सक्दो काम गरेको छु । फेरि पनि म जनताको सेवा र जिल्लाको विकासका लागि उम्मेदवार भएको हु । त्यसकारण मलाई यहाँका जनताले मतदान गर्छन भन्नेमा म ढुक्क छु ।
विकासका योजना चाही के–के छन् त ?
म सँग धेरै योजनाहरु छन् । विशेषत यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी कै हो । यो समस्या समाधान गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो । त्यस्तै विगत लामो समय देखि रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने मेरो अर्को योजना रहेको छ भने तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी नुवाकोटलाई बनाउन पनि म लड्नु छु ।
अर्कोकुरा तपाईलाई स्मरण गराउ म नुवाकोटको क्षेत्रको उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस भएको थिए । तर पार्टीले कांग्रेसका हस्ती अजुर्ननरसिंह केसी र रामशरण महतलाई क्षेत्रको उम्मेदवार बनाएर मलाई प्रान्तमा पठाउने योजना निर्णय ग¥यो । त्यसपछि म पछि हटे र भने अव म बाहिरै बसेर नुवाकोटको विकास र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि लड्छु । प्रान्तमा चुनाव लड्दिन नयाँलाई अवसर दिन्छु भने । त्यसपछि स्वयंम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले जगदिश तिमीले यस्तो भनेर हुदैन तिमीजस्तो मान्छे जनतालाई मात्र होइन पार्टीलाई पनि चाहिन्छ । तिमी तीन नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको दाबेदार हौ । चुनाव लड्नै पर्छ भनेपछि म निर्वाचनमा होमिएको हो । त्यसकारण म उम्मेदवार बनेको क्षेत्र मात्र होइन समग्र नुवाकोटको विकास गर्ने मेरो योजना छ । मैले यहाँको सम्पूर्ण कुरा बुझेको छु । सोही अनुसार विकास निर्माणका काम गर्छु ।
तर, प्रतिस्पर्धीसँग जगदिश्वरलाई चुनाव जित्न त्यती सहज छैन भन्छन् नी ?
मेरो विपक्षीसँग सामाजिक सम्बन्ध र विकास कुनै पनि कोणबाट तुलना हुनसक्दैन । जनतासँग भिज्न नसक्ने आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता र आसेपासेबाहेक अरु कोहि नचिन्ने स्वभावका उनी र १० वर्षको बालकले जगदिश अंकल देखि ९० वर्षको बृद्धले जगदिश बाबु भन्ने ठाउँमा उनीहरुसँग मेरो के प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मलाई नुवाकोका जनताको अपार माया छ । म प्रति विश्वास र भरोसमा पनि छ । त्यसले गर्दा उनीसँग मेरो प्रतिस्पर्धा नै हुदैन ।
कति मतले जित्नु हुन्छ ?
यति–उति भनेर के प्रचार गर्नु । तर म अत्याधिक मतले विजयी हुन्छु ।